ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အမှတ်တရ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် မင်္ဂလာပွဲလေးအတွက် စုံတွဲတိုင်း လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:54 PM
ေ၇းထား တာလားဟယ်..... ..
MG >> ဟုတ်ကဲ့ သန်းရွှေသမီးမှ တင့်တင့်တယ်တယ် မင်္ဂလာဆောင်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်လုပ်အားခနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ ရပ်တည်နိုင်သူအားလုံး တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ မင်္ဂလာဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ Professional Magazines & Articles တွေ ကျွန်မသေချာဖတ်ပြီးမှ အသုံးဝင်နိုင်သူ မိန်းကလေးများအတွက် ရည်စူးပြီး စဉ်းစားရေးထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် .. Thanks for reading :)
u tat ma lo lar Linlet yayy.... phatsar lay myar sent par ohmm. :)
မိန်းကလေး များ ၁ သက် ၁ ခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး စွာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကျင်းပ ချင်တာ မိန်းကလေး တိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ပါပဲ။ ညီမလေး အိမ်မက် ကလေး တကယ် ဖြစ်လာမယ့် အတွက် ၀မ်းသာ ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ :)
Lada Ma....Nhar Bue hta nay thay tae'
haehh...nhar ma...u mix with "Sex" and "Politicts"...
ma kyite yin ma phat nat pot...
nin tot lo har tway kyaunt Myanmar Pyi kyee ma toe tat tar...
sharing လုပ်ထားပေးတာကျေးဇူးပဲနော်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တသက်တခါပဲ လက်ထပ်ရတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထားနိုင်တော့ အမှားအယွင်းနည်းပြီး လူတိုင်းပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရမဂ်လာပွဲလေးဖြစ်တာပေါ့။
ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပိုင်းလေးကိုယူပြီး အသုံးချတတ်ရင် အရမ်းကို အကျိုးရှိတာပေါ့နော်....
ဟုတ်ပါတယ်... ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောကြပါ၊၊ အကောင်းမြင် အပြုတွေး စိတ်ဓါတ်နဲ့ အတွေးအမြင် ဖလှယ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်၊၊